Hordhac: Arsenal vs Norwich City – Gunners Iyo Canaries Oo
Arsenal oo raadinaysa guusheedii saddexaad ee xidhiidh ah tartamada oo dhan ayaa maanta soo dhawayn doonta kooxda halka ugu hooseysa kaga jirta miiska kala sarreynta Premier League ee Norwich City.
Gunners ayaa kaddib dib u bilaabistii kubadda cagta England qaab musiibo ah ku bilawday iyaga oo guuldarrooyin kala soo kulmay kooxaha Manchester City iyo Brighton xilli ay intaas u dheeraayeen dhaawacyo badani.
Si kastaba, kooxda tababare Mikel Arteta ayaa kusoo laabatay wadada guulaha isla markaana guul 2-0 ah kasoo gaadhay Southampton horyaalka kahor intii aysan wareegii siddeed dhammaadka ee FA Cup kaga soo adkaan Sheffield United 2-1.
Arsenal ayaa walow aysan rajo buuran qabin haddana isha ku haysa kaalmaha Champions League loogu soo baxo, guul ay ka gaadhaan Norwich City ayay lix dhibcood ugu jirsan doonaan kooxda booska lixaad ee Wolves.
Arrinta guusha waajibka kaga sii dhigaysa Arsenal maanta ayaa ah in dhammaan afarta kulan ee soo socda ee horyaalka ay la ciyaari doonaan kooxo wakhtigan kaga sarreeya miiska kala sarreynta.
Dhinaca kale Norwich ayaa u baahan guul muhiim ah xilli ay haatan lix dhibcood u jiraan kaalmaha horyaalka loogu bad-baado walow aysan calaamado ay horyaalka kusii joogayaan muujin tan iyo dib u bilaabistii ciyaaraha.
Qaab Ciyaareedka Labada Kooxood Ee Premier League
Arsenal ayaa soo guuleysatay afar kamid ah lixdii kulan ee ugu dambeeyay ee ay horyaalka kasoo ciyaartay halka ay laba guuldarro soo qaabishan, dhinaca kale Canaries ayaa shan jeer laga soo adkaaday lixdii kulan ee ugu dambeeyay ee horyaalka iyagoo hal kulan adkaaday.
Arsenal oo dhibaato dhaawacyo ah lasoo kulmaysay tan iyo kulankii Manchester City booqdeen ayay liiska dhaawacyadeeda kulankii ugu dambeeyay ku biireen Mesut Ozil iyo David Luiz.
Ozil ayaa kulankii Sheffield gabi ahaanba seegay kaddib dhaawac dhabarka ah balse soo laaban kara ciyaarta maanta halka Luiz oo garoonka uga baxay dhaawac canqawga ah aan wali la qeexin heerka uu dhaawaciisu gaadhsiisan yahay.
Gabriel Martinelli, Pablo Mari iyo goolhaye Bern Leno oo sidoo kale dhaawacan ayaan iyagu wax fursad ah u haysan ciyaartan si lamid ah Calum Chambers.
Lucas Torreira ayaa kasoo muuqan kara ciyaarta sidoo kale daafaca midig ee Cedric Soares oo ugu dambayn samayn kara ciyaarista kulankiisa ugu horreeya ee uu mudo sugayay.
Norwich oo ay hore uga maqnaayeen daafacyada kala ah Hanley, Zimmermann iyo Byram ayuu sidoo kale ka maqnaan doonaa Klose oo casaan qaatay kulankii FA Cup-ka ee Man United.
Xogta Kooban Ee Isaragii
Saacada: 8:00 habeenimo xilliga geeska Africa